Coiling belt used fo - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: coiling belt used for fishing pole (Englisch - Burmesisch)
The type of checksum used for images
The type of checksum used for files
Set the drive to be used for burning
Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations.
စကေးချမှတ်ခြင်းနဲ့ အခြား အသွင်ပြောင်းခြင်းများ အတွက် သုံးစွဲတဲ့ ဆက်စပ်ဖန်တီးခြင်း အဆင့်ကို သတ်မှတ်ပါ။
Even plasma from recovered patients was proposed to be used for treatment.
ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားသည့် လူနာများထံမှ ပလာစမာကိုပင် အသုံးပြု ကုသရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
When enabled, the selected brush will be used for all tools.
ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရွေးလိုက်တဲ့ စုတ်တံကို ကိရိယာများ အားလုံးအတွက် သုံးစွဲလိမ့်မယ်။
When enabled, the selected gradient will be used for all tools.
ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရွေးထားတဲ့ ရောင်စဉ်တန်းကို ကိရိယာများ အားလုံးအတွက် သုံးစွဲလိမ့်မယ်။
When enabled, the selected pattern will be used for all tools.
ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရွေးထားတဲ့ နမူနာပုံစံကို ကိရိယာများ အားလုံးအတွက် သုံးစွဲလိမ့်မယ်။
Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium.
အကယ်၍ သုံးထားသော သွင်ပြင်သည် Adium ဖြစ်လျှင် Adium သွင်ပြင်သုံးရန် လမ်းကြောင်း
Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created dialogs.
အသစ် ဖန်တီးတဲ့ အညွှန်းစာမျက်နှာများမှ အလွှာများနဲ့ ချာနယ် အစမ်းမြင်ကွင်းများမှာ သုံးစွဲဖို့ အစမ်းမြင်ကွင်း အရွယ်ကို သတ်မှတ်ပါ။
Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. Deprecated.
From the start, we will be carefully curating data to ensure that it can be used for future studies.
နောက်ပိုင်း လေ့လာမှုများအတွက် ဒေတာကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဒေတာစုဆောင်းမှုကို လုပ်ငန်းစတင်ချိန်ကတည်းက သတိထား၍ ပြုလုပ်သွားပါမည်။
On 8 February 2020, the laboratory OncoGen in Romania publishedapaper on the design ofavaccine with similar technology to the one used for cancer neoantigen vaccination therapy.
2020 ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8 ရက်တွင် ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရှိ OncoGen ဓာတ်ခွဲခန်းက cancer neoantigen ကာကွယ်ဆေး ကုထုံးအတွက် အသုံးပြုသည့် နည်းပညာနှင့် ဆင်တူသော နည်းပညာဖြင့် ကာကွယ်ဆေး ဖော်စပ်ပုံအတွက် စာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
These data were used for assessing the trends of COVID-19 in EU/EEA and the UK, and comparing them to that in Italy.
ဤအချက်အလက်များကို EU/EEA နှင့် UK ရှိ COVID-19 ၏ အလားအလာအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရာနှင့် ၎င်းနိုင်ငံများ၏ အခြေအနေများကို အီတလီနိုင်ငံ၏ အခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
However, due to the high false-negative rate, which may accelerate the epidemic, clinical manifestations started to be used for diagnosis (which no longer solely relied on RT-PCR) in China on February 13, 2020.
သို့သော် ရောဂါမရှိကြောင်းမှားယွင်းစစ်ဆေးမိနှုန်း မြင့်မားမှုက ကူးစက်ကပ်ရောဂါ၏ အရှိန်ကို မြှင့်ပေးလိုက်နိုင်သဖြင့် ရောဂါရှာဖွေစိစစ်ရေးအတွက် (RT-PCR တစ်မျိုးတည်းပေါ်တွင်သာ မှီတည်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် 2020 ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ 13 ရက်နေ့က စတင်ခဲ့သည်။
ပြင်းထန်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားနေရသော လူနာများကို အဆုတ်အကူစက် extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးရမည်။ ၎င်းသည် အသက်ကိုခြိမ်းခြောက်သည့် နှလုံးဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ယိုယွင်းပျက်ဆည်းခြင်းတို့ကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော နှလုံးနှင့်အဆုတ်တို့၏ လုပ်ငန်းကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်း၍ ပြင်ပမှ စက်၏ အကူအညီဖြင့် သွေးလည်ပတ်စေကာ အောက်ဆီဂျင်ရယူစေသော နည်းပညာတစ်မျိုးပင် ဖြစ်သည်။
je te fais un bisou (Französisch>Englisch)better world (Englisch>Tagalog)tip of hair (Englisch>Tagalog)life cycle (Englisch>Tagalog)hola amigo ktal (Spanisch>Russisch)wo bu shi (Chinesisch (Vereinfacht)>Englisch)bad words (Englisch>Swahili)manila clams (Englisch>Tagalog)bahala ka sa buhay mo (Tagalog>Englisch)beproef (Afrikaans>Englisch)sistemas (Portugiesisch>Französisch)memohon maaf diatas penanguhan (Malaysisch>Englisch)i can't match what you want (Englisch>Tagalog)manusia (Indonesisch>Chinesisch (Vereinfacht))tapau (Finnisch>Schwedisch)chedu sampradayam (Telugu>Englisch)maximum tolerance (Englisch>Tagalog)marisan sa ilokano (Englisch>Tagalog)postavi (Bosnisch>Italienisch)namque filii (Latein>Englisch)relationships (Arabisch>Englisch)jesus (Französisch>Deutsch)phallus dei (Latein>Englisch)bonjour ma grande (Französisch>Englisch)landscaping (Englisch>Tagalog)